AutoSEO र FullSEO, कुन Semalt SEO सेवा उत्तम छ?
यस समयमा, प्रायः सबैले SEO बारे सुनेका छन्। तपाईं धेरै जसो यसको अर्थ र यो कसरी काम गर्दछ संग राम्ररी परिचित हुनुहुन्छ। आफ्नो टाउको बाहिर, तपाईं यो ट्र्याफिक ड्राइभिंग मा र तपाईंको वेबसाइट को रैंकिंग प्राप्त मा कती भयानक हो व्याख्या गर्न आपत्ति छैन। जहाँसम्म, तपाईं एसईओसँग परिचित हुनुहुन्न भने हामीसँग तपाईंको लागि उत्तम लेख छ। कृपया यहाँ क्लिक गर्नुहोस् र द्रुत र चाखलाग्दो पढ्नुहोस् SEO को अर्थ के हो र यसले कसरी तपाइँको व्यवसाय बढाउन मद्दत गर्दछ।
तर धेरै पटक तुरून्त मैले सोध्छु कि कस्तो प्रकारको एसईओ तपाईं चाहानुहुन्छ AutoSEO वा FullSEO मैले यस लुक प्राप्त गर्दछु। एक, एक बच्चा, तपाईले उनीहरूलाई नबुझेको हिसाबले सोध्नुहोस्। ठिक छ, हामी केटाकेटीहरू होइनौं, र हामी निश्चित छौं यदि तपाईं टाँसिरहनुभयो भने, तपाईं एसईओको बारेमा बढी सिक्नुहुनेछ। अन्त्यमा, तपाईले आफ्नो दिमाग बनाउनु भएको छ कि SEO को कुन प्रकारको तपाई चाहानुहुन्छ।
तपाईंलाई थाहा छ, SEOs तपाईंको वेबसाईटमा पहिचान गर्न सस्तो तरीका हो। र किनभने ती अत्यधिक लक्षित छन्, तपाईंको दर्शकहरूले तत्काल जडान महसुस गर्न सक्दछन् जब उनीहरू तपाईंको साइट भ्रमण गर्छन्।
त्यसोभए मिलियन डलर प्रश्न रहन्छ कुन प्रकारको एसईओ उत्तम फुलसेओ वा AutoSEO हो?
के तपाईं FullSEO वा AutoSEO लाई प्राथमिकता दिनुहुन्छ?
धेरै वेबसाइट मालिकहरू र इन्टरनेट प्रयोगकर्ताहरूको लागि उनीहरूसँग कुनै संकेत छैन जुन यसले के बुझाउँछ। र यो त्यस्तो धेरै कुरा होइन जुन धेरैलाई थाहा हुन्छ। धेरै वेबसाइट मालिकहरू केवल SEO मा विश्वास गर्छन्। तिनीहरू सबै गहिरो विवरणको साथ बोर हुन चाहँदैनन्। यद्यपि हामीले यो जानकारी आवश्यक पाउँदछौं, विशेष गरी जब तपाई जस्तो व्यक्तिले यसलाई बुझ्ने प्रयास गर्नुहुन्छ।
SEO बुझ्नु अविश्वसनीय फाइदाजनक छ। यस तरिकाले, तपाई सफलतापूर्वक बजेटमा पुग्नुहुन्छ जबकि तपाईको सफलताको सम्भावना अधिकतम पार्दै।
Semalt जस्ता हजारौं एसईओ सफ्टवेयर र प्लेटफर्मको साथ, डिजिटल मार्केटिंग विश्व एक भूलभुलैया बन्यो। वेबसाइट मालिकहरू अब कसलाई छनौट गर्ने वा कुन सेवाहरू सब भन्दा उत्तमका बीच समातिएका छन्। एसईओ ग्राहकहरु एक एसईओ एजेन्सी भाडामा उपलब्ध छ वा उपलब्ध एसईओ सफ्टवेयर / प्लेटफर्मको बीच फाडिएको छ। र यद्यपि तिनीहरू केहि समानताहरू साझा गर्छन्, तिनीहरू फरक छन्।
फुलसेओले एक व्यक्ति वा एसईओ विशेषज्ञहरूको टोली सामिल गर्दछ जुन यहाँ टोली Semalt मा गर्दछ। यी विज्ञहरूले तपाईको वेबसाइटमा प्रयोग गर्न विभिन्न अन-पेज र अफ-पृष्ठ एसईओ रणनीतियहरु लाई ब्रेस्टस्ट्रम र रणनीति बनाउँछन्।
जबकि AutoSEOs ले साईटमा SEO रणनीतिहरू कार्यान्वयन गर्न सफ्टवेयर प्लेटफर्मको प्रयोग समावेश गर्दछ। दुःखको कुरा, धेरै वेबसाइट प्रयोगकर्ताहरू स्वत: SEO को विचारसँग सहजै छैनन्।
कुन अझ राम्रो छ भनेर निर्धारण गर्न मद्दत गर्न हामीसँग दुबै एसईओमा एक नजर राख्नेछौं र उनीहरूका प्रो र कन्सलाई मूल्या evalu्कन गर्नेछौं।
फुलसेओले अझै सबै सेवाहरू र एसईओ को उपयोग गरेर फाइदाहरू समावेश गर्दछ। तपाईं जैविक ट्राफिक उत्पन्न गर्न सक्नुहुनेछ र तपाईंको वेबसाइटलाई प्राकृतिक रूपमा क्रमबद्ध गरिएको हेर्नुहोस्। कुनै श doubt्का छैन कि यो जुन वेब मालिकले चाहान्छ तर यो कसरी सम्भव छ? धेरै वेबसाइट मालिकहरूले एसईओको मूल्यलाई कम महत्त्व दिन्छन्। धेरैले सोच्दछन् कि एक पटक तिनीहरूले कुञ्जी शब्दहरू राखे पछि, उनीहरूको वेबसाइट एसईओ अनुकूलित हुन्छन्। तर त्यो केस छैन। यो यही कारणले हो कि धेरै इन्टरनेट प्रयोगकर्ताहरूले पूर्ण एसईओ कती राम्रो छ भन्नेमा शंका गर्छन्।
Semalt पेशेवरहरुमा तपाइँको FullSEO छोड्नु तपाइँको वेबसाइटको लागि एक राम्रो निर्णय हुन सक्छ। पेशेवरको रूपमा, हामी हाम्रो जीवन यस काममा खर्च गर्दछौं। हामी हाम्रो निन्द्रामा पनि गर्छौं, त्यसैले तपाईको फुलसेओलाई अनुकूलन गर्नका लागि अरू कोही राम्रो छैन। र हामी तपाइँलाई ती नयाँ आश्चर्यजनक विचारहरू विकास गर्न थप थप समय दिन्छौं। फुलसेओहरू कठिन र समय खपत गर्ने छन्, तर तपाईले यसको चिन्ता लिनु पर्दैन। यसलाई श्रमको विभाजनको रूपमा सोच्नुहोस्। कुनै कम्पनी, व्यवसाय वा व्यक्तिगत टापु होईन। हाम्रो एसईओ टीमलाई त्यस्ता कार्यहरू प्रत्यायोजन गरेर, तपाईं आफैंलाई पर्याप्त समय दिनुहोस्। समय तपाई आराम गर्न खर्च गर्न सक्नुहुनेछ भन्दा निद्रा अभावको भन्दा दु: खित हुनेछ। र घाटालाई विचार गर्नुहोस् यदि तपाईको सम्पूर्ण प्रयास पछि तपाई आफ्नो पूर्ण एसईओको परिणामबाट खुशी हुनुहुन्न।
जहाँसम्म, तपाईंको वेबसाइटको लागि अन-पृष्ठ र अफ-पृष्ठ एसईओ दुबैको रूपमा फुलसेओ प्रयोग गर्ने केहि मुख्य फाइदाहरू छन्।
फुलसियो प्रयोगका पेशेवरहरू
तपाईंसँग तपाईंको एसईओ रणनीतिमा पूर्ण नियन्त्रण छ। फुलसेओका साथ तपाईले डिक्ट्ट गर्नु हुन्छ कि कता जान्छ। तपाइँ तपाइँको विचार, अवधारणा र व्यक्तित्व को लागी तपाइँको वेबसाइट मा हस्तान्तरण गर्न सक्नुहुनेछ जबकि तपाइँको SEO अनुकूलन। तपाईंको रणनीति पूर्ण रूपमा तपाईंको हो, यसको मतलब यो अद्वितीय हो।
तपाईं प्रमाणित गर्न सक्नुहुनेछ कि SEO कार्य योजनाको अनुसार ह्यान्डल गरिएको छ। तपाईंको योजना ट्या tan्क भएको हेर्न वेबसाइट सुरू गर्ने राम्रो तरीका होइन। पूर्ण एसईओको साथ, तपाइँ तपाइँको साइट निगरानी गर्न को लागी र तपाइँको एसईओ योजना को कार्यान्वयन गर्न त्रुटिहरु लाई सही गर्नुहोस्। यस तरिकाले, तपाईं परिणामसँग खुशी हुनुहुन्छ।
FullSEOs को साथ, तपाईं आफ्नो अफ पृष्ठ सुधार गर्न सक्षम हुनुहुन्छ। तपाइँको साइटमा ट्राफिक अनुकूलित गर्न अफ-पेज हुनु महत्वपूर्ण छ। अफ पृष्ठहरू तपाइँको वेबसाइट बाहिर तपाइँको वेबसाइट हो। जब तपाईं अर्को ब्लगमा पाहुना पोष्ट लेख्नुहुन्छ वा टिप्पणी छोड्नुहुन्छ, जुन अफ-पृष्ठ पदोन्नति मानिन्छ। FUllSEOs, तपाईंलाई लिंकहरू ह्यान्डपिक गर्न अनुमति दिनुहोस् यी ब्याकलिंक्सहरूको लागि तपाईंले प्रयोग गर्नुहुने लिंकहरू। यसले इन्टरनेट प्रयोगकर्तालाई तपाईंको कमेन्ट र तपाईंको वेबसाइट सम्बन्धित गर्न सजिलो बनाउँदछ। स्किनकेयर वर्णन गर्ने टिप्पणीको लागि, फुलसेओले तपाइँलाई तपाइँको वेबसाइटमा स्किनकेयरको बारेमा कुरा गर्ने लिंकहरू ह्यान्डपिक गर्न सजिलो बनाउँदछ। यस तरिकाले, तपाईं टिप्पणी पाठकहरूलाई ट्राफिक र सम्भावित ग्राहकहरूमा रूपान्तरण गर्नुहोस्।
तपाइँ छनौट गर्न सक्नुहुन्छ जहाँबाट तपाइँको साइट लि linked्क गरिएको छ। फुलसेओले तपाईंलाई लिंक गर्ने साइटहरूको क्वालिटी र तपाईंको ब्याकलिंक्स वरपर भएका सामग्रीको गुणवत्ता छनौट गर्न अनुमति दिन्छ। यस तरिकाले, तपाईले नियन्त्रण गर्नुहुन्छ कि कसले के देख्छ र तपाईको साइटलाई यसको उत्तम रूपमा प्रदर्शन गर्दछ।
केहि पनि सही छैन, र त्यहाँ फुलसियो प्रयोग गर्न केहि डाउनसाइडहरू छन्
समय खपत: फुलएसईओ लाई यसको लेखकहरूको धेरै समय र प्रयासको आवश्यक पर्दछ। विशेष गरी जब यो त्यस्तो क्षेत्रमा द्वारा गरिएको छ जो क्षेत्रमा अनुभव छैन। एसईओ एजेन्सीको सेवाहरू भाडामा लिनबाट बच्न यो एक उत्तम तरिका हुन सक्छ।
यसको लागि एक समर्पित टोली चाहिन्छ: तपाईलाई अत्यन्त उच्च समर्पित टोली चाहिन्छ अद्भुत फुलएसओ बन्द गर्न।
ठूला वेबसाइटहरूका लागि, फुलसेओ कार्यान्वयनले लामो समय लिन सक्दछ।
२१ औं शताब्दी प्रविधिमा धेरै प्रगतिहरूको साथ आएको छ। मानव प्रयास धेरै उत्पादन मा सुधार र टेक्नोलोजी को सबै यसको साथ धन्यवाद कम छ। र पक्कै पनि, शानदार व्यक्तिहरू जसले यसलाई सिर्जना गर्न मद्दत गर्दछ।
AutoSEO हाम्रो जीवनको अर्को पक्ष हो जहाँ टेक्नोलोजीले ठूलो सहयोगको प्रस्ताव गरेको छ। स्वचालित एसईओ पूर्ण स्वचालित वा अर्ध स्वचालित एसईओ सफ्टवेयर र प्लेटफर्मको एसईओ रणनीति कार्यान्वयन गर्न को उपयोग हो। यो प्रविधि मानव प्रयास को लागी सीमित छ।
यहाँ AutoSEO को फाइदाहरु छन्
यो फुलसियो भन्दा सस्तो छ। यो फुलसियोको तुलनामा सस्तो हो। किनभने थोरै वा कुनै मानवीय प्रयास आवश्यक छ, त्यहाँ कुनै एसईओ टोली छैन। यसले मर्मत लागत कटौती गर्दछ जसले AutoSEO सेवा उत्पादकहरूलाई उनीहरूको लागत घटाउन सम्भव बनाउँदछ।
यो सजिलै कठिन कामहरू सम्हाल्छ: थकित हुने क्षमता बिना, मस्तिष्क निकास वा बोर लाग्ने क्षमता बिना, मेशिनहरूले अत्यन्त चाँडो र स्थिर प्रक्रियाको गति कायम राख्न सक्छ। यसले लेखा परीक्षाहरू, टुटेका लिंकहरू, कुञ्जीशब्द घनत्व, ट्यागहरू र अन्य महत्त्वपूर्ण जानकारी वेबसाईटहरूमा यसको आकारको पर्वाह नगरी, जस्तै ह्यान्डल गर्न काम गर्दछ।
तपाईको कुञ्जी शव्द रँकिंगमा अधिक सहि र अप-टु-डेट डाटा प्राप्त गर्न सजिलो छ।
यस टेक्नोलोजीले तपाईंलाई आफ्नो प्रतिस्पर्धा ब्याकलिंक्स, कीवर्ड घनत्व, ट्यागहरू र अन्य लाभदायक डाटा विश्लेषण गर्न क्षमता दिन्छ। त्यसोभए तपाईं यस जानकारीको शोषण गर्न सक्नुहुनेछ, उनीहरूको रहस्य बुझ्नुहोस् र तपाईंको साइट सुधार गर्नुहोस्।
AutoSEO ले तपाइँलाई SEO कार्यहरू अनुसूची गर्न अनुमति दिन्छ जसले महत्त्वपूर्ण रूपमा समय बचत गर्दछ।
त्यहाँ ठूलो SEO टोली भाँडामा लिनु आवश्यक छैन। टेक्नोलोजीले सफ्टवेयरलाई दस व्यक्तिको काम गर्न सक्छ, र यसले दुबै खरीददार र विक्रेताको लागि बचत गर्दछ। ठुलो टोली भाडामा लिने आवश्यकतालाई हटाई, साना कम्पनीहरू र स्टार्टअपहरू कठोर बजारमा बाँच्नको लागि उत्तम अवसर खडा गर्दछन्।
मानव ओभरचेच अझै आवश्यक छ। त्यहाँ धेरै कारणहरू छन् किन मानिस अझै पनी सबैभन्दा नाजुक र महत्त्वपूर्ण कार्यहरू सम्हाल्छ। जस्तोसुकै परिष्कृत टेक्नोलोजी भए पनि, यसका लागि खराबीको लागि अझै मौका छ।
जब सही रूपमा प्रयोग नगरिएमा एसईओ सफ्टवेयरले नराम्रो ब्याकलिlin्कहरू सिर्जना गर्दछ। यसले तपाईंको वेबसाइटलाई दण्डित गर्न सक्दछ।
धेरै एसईओ सफ्टवेयर एसईओ कुञ्जीपाटी, ब्याकलिks्क इत्यादिको मात्रामा केन्द्रित हुन्छन् उनीहरू गुणवत्तामा त्यति ध्यान दिदैनन्। यो लामो समय मा समस्या हुन सक्छ।
प्राय: एसईओ सफ्टवेयर वा प्लेटफर्मको साथ सिर्जना लिंकहरू सायद तपाईको साइटमा यातायात उत्पन्न गर्दछ।
तपाईंले कुन प्रयोग गर्नुपर्छ?
दुबै सेवाहरू प्रस्ताव गरेर, Semalt तपाईंलाई सबैभन्दा उपयुक्त विकल्प छनौट गर्न उत्तम अवसरहरू दिन्छ। प्रत्येक व्यक्ति र वेबसाइट विशेष हो, र तपाईं एक विशेष उपचारको योग्य हुनुहुन्छ। तपाईलाई जस्तोसुकै विकल्प पनि राम्रो लाग्दछ, हामीलाई थाहा दिनुहोस्, र हामी तपाईले हेर्नु भएको उत्तम एसईओ साइट डेलिभर गर्नेछौं। हाम्रो अद्भुत टोली र हाम्रो ग्राहक सेवा एजेन्टहरूसँग जो सधैं उपलब्ध छन्, तपाईं कुनै पनि प्रश्नहरू सोध्न सक्नुहुन्छ जुन तपाईंसँग हुन सक्नुहुनेछ। हामी अझ बढी विश्वस्त महसुस गर्दछौं जुन तपाईंलाई थाहा छ कि तपाईंले अब फुलसेओ र AutoSEO को अर्थ बुझ्नुभयो। यस ज्ञानको साथ, अब Semalt FullSEO र AutoSEO सेवाहरू बीचमा छनौट गर्न सक्नुहुनेछ सबै जानकारीको साथ तपाईं आफ्नो वेबसाइट र व्यवसायको लागि उपयुक्त उपयुक्त SEO सेवा छनौट गर्न सुनिश्चित गर्न आवश्यक छ। अब तपाई जुनसुकै विकल्प छनौट गर्न सक्नुहुन्छ जुन तपाईलाई उत्तम लाग्छ।